အံဒင်ကျောက်မီးသွေးသုံးလျှပ်စစ်စက်ရုံကို သူတို့ဘယ်လိုတာဝန်ယူသလဲ? > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် / အံဒင်ကျောက်မီးသွေးသုံးလျှပ်စစ်စက်ရုံကို သူတို့ဘယ်လိုတာဝန်ယူသလဲ?
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ April 24, 2015 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် Leaveacomment 230 Views
ရေးသားသူ: ကေသီ > အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
“အခုလက်မှတ်ရေးထိုးတာက MoU သဘောတူစာချုပ်ဆိုတော့ လုပ်တော့မှာပေါ့။ ဒါက ကျနော်တို့ ကြားတာပဲ ရှိသေးတယ်။ တရားဝင် ကျနော်တို့ကို အသိပေးတာ မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ အမှန်က အသိပေးရမယ်” ဟု မွန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး နိုင်လဝီအောင်က ပြောသည်။
အဆိုပါကျောက်မီးသွေးစက်ရုံဆောက်လုပ်သည့်စီမံကိန်းကာလမှာ ၄ နှစ်မှ ၆ နှစ်ထိ ခန့်မှန်းထားပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုငွေပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၈ ဘီလီယံဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်မည်ဟု လျာထားကြောင်း ၄င်းကုမ္ပဏီက ဖော်ပြထားသည်။
“အသေးစိတ်ကအစ ပြည်ထောင်စုကပဲ ကိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ပြည်နယ်အစိုးရမှာ မရှိဘူး။ သဘောထားမေးလာတဲ့အခါကျတော့ သဘောထားတော့ သူတို့မေးလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်းကာလ နိုင်ငံတော်က လုပ်တဲ့ စီမံကိန်းကျတော့ ပြည်နယ်အစိုးရက ဘယ်လိုကန့်ကွက်တော့မလဲ” ဟု နိုင်လဝီအောင်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်ဥပဒေထွက်လာသော်လည်း နည်းဥပဒေမထွက်လာသေးသည့်အတွက် လုပ်ရကိုင်ရ ခက်နေကြောင်း လျှပ်စစ်ဥပဒေကိုလည်း တရားဝင် ရိုက်ထုတ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဝန်ကြီးက ပြောသည်။
“နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများကို ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်၊ ဒေသခံပြည်သူများ လက်မခံပါက စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်မဖော် မလုပ်ပါဘူးလို့ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အကြိမ်ကြိမ် ကတိပေးထား” ဟု ရေးမြို့နယ်လူမှုအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဝင်က ပြောသည်။
Toyo Thai Public Public Company Limitd (တိုယိုထိုင်း) သည် ဂျပန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ Ultra Super Critical (USC) ဖြင့် သြစတြေးလျ၊ အင်ဒိုနီရှားနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများမှ ကျောက်မီးသွေးများကို တင်သွင်းမည်ဟု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ၄င်းတို့အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်ဒေသဖြစ်သည့် မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် အံဒင်ကျေးရွာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသခံများအတွက် လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်မှုနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျနည်းသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းကို သဘောတူကြောင်း ဦးအောင်ခင်၊ ဦးသိန်းနိုင်၊ ကိုလှသန်းနှင့် မစန်းစန်းအေးတို့မှ ဦးဆောင်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
ရေးမြို့လူမှုအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို ကန့်ကွက်သည့်လက်မှတ် ၃၀ဝ၀ ကျော်ကို ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့သည်။
Toyo Thai Corporation Public Company Limited (TTCL) မှ CEO နှင့် President ဖြစ်သူ Mr Hironou Iriya ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင်လည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တတ်သိပညာရှင်နှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများကို ကျောက်မီးသွေးသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့သည်။
၄င်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် TTCL ကုမ္ပဏီအား ပင်လယ်ရေအပူချိန်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဆိုပါကုမ္ပဏီအား အကြံပြုခဲ့သည်။
“သူတို့သုံးတဲ့ ရင်းမြစ်က Bituminous ကျောက်မီးသွေးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ အဲဒါက မီးခိုးထွက်မှုရှိတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူတို့တင်ပြတဲ့နိုင်ငံတွေက အအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေ။ ကျမတို့က အပူပိုင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။ ပင်လယ်ရေက ၃ ဒီဂရီ C တက်လာမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကဆိုရင် နဂိုက ၂၇ ဒီဂရီ C ရှိတယ်။ ၃ လောက်တက်မယ်ဆိုရင် ၃၀ ဒီဂရီ C ဖြစ်မယ်။ သူက ၁၄ ဒီဂရီ လတ္တီတွဒ်မှာရှိနေတဲ့အတွက် မုန်တိုင်းအစပျိုးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မိုလို့ ကျမတို့ဟာ စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ အဲဒါလေတစ်ချက်ကို သတိထားဖို့သင့်တယ်” ဟု မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှ ပထဝီဘာသာ ပါမေက္ခ ဒေါ်ကြင်စွမ်း (အငြိမ်းစား)က ၄င်းအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်လယ်ရေအပူချိန် ၃ ဒီဂရီ C ထိကုမ္ပဏီမှ grantee ခံထားပြီး စက်ရုံမှ ၅၀ဝ မီတာအထိ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာစစ်ဆေးနေမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါနေရာအနီးတဝိုက်ထိကို ၃ ဒီဂရီ C ထိ လုံးဝပေးကျော်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပင်လယ်အဝထိ သက်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့စံချိန်စံညွန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွန်းအတိုင်း လိုက်နာပြီး တိုင်းတာပါမည်ဟု ကုမ္ပဏီမှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ဒေါ်နီနီစံက ရှင်းလင်းပြောပါသည်။
“တကမ္ဘာလုံးမှာ မုန်တိုင်းရဲ့ intensity က များလာတယ်။ များလာတဲ့အခါကျတော့ တို့ဟာ ဒီလိုနေရာမှာ တကယ့်ကို critical point (အန္တရယ်အမှတ်) မှာ ရှိနေတယ် ရေက။ ၁၀ ဒီဂရီအထက်ဆိုရင် မုန်တိုင်းက အစပျိုးနေရာဖြစ်တယ်။ အဲတော့ တို့က အပူကို ထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မုန်တိုင်းကို အားပေးသလို ဖြစ်တယ်” ဟု ဒေါ်ကြင်စွမ်းက အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
“မုန်တိုင်းဆိုတာက ပင်လယ်ရေအပူချိန်မြင့်လာရင် ရေငွေ့ပြန်နှုန်းမြင့်လာတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ ပိုပြီးတော့ အားကောင်းတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေပြင်ပူလာရင် ပင်လယ်ရေပြင်မှာ အပူချိန်တိုးလာရင် ကျမတို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတာက ကျမတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်အတွက် ပိုပြီးတော့ စဉ်းစားမယ်။ ကျမတို့က recover လုပ်မယ့်စရိတ်မတက်နိုင်ဘူး။ သူတို့က ချမ်းသာတော့ ပြန်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်” ဟု ဒေါ်ကြင်စွမ်းက ပြောပါသည်။
“ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၇-၈ ဒီဂရီ C ထွက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒီ ၃ ဒီဂရီ C ကိုမှ လက်မခံဘူးဆိုရင် ကျမတို့က ဒီထက်ပိုပြီးတော့ အလေးထားပြီးတော့ လေ့လာပြီးတော့ ထပ်လုပ်ပေးဖို့ လေ့လာရပါလိမ့်မယ်” ဟု ဒေါ်နီနီစံက ပြောပါသည်။
ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပြုတင်ပြထားပြီးဖြစ်သော ၁၂၈၀ မီဂါဝပ်ရှိသည့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံစီမံကိန်အဆိုပြုနေရာတွင် သဘာ EIA နှင့် SIA ပြုလုပ်ရန်အတွက် စီမံကိန်းနေရာသို့ သွားရောက်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုလိုကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံတင်ပြထားသည်။
အံဒင်ကျေးရွာအနီး ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာမှု Feasibility Survey ဆောက်ရွက်ခွင့်ကာလမှာ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသွားသည့်အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
တိုယိုထိုင်းကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင်တစ်ကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်တစ်ကြိမ် ၄င်းတို့စက်ရုံအကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြရန် ဒေသခံတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
“ကျမတို့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေသွားတယ်။ ပြည်သူလူထုအသံကို နားထောင်တယ်။ အခုအချိန်ထိလည်း နားထောင်နေဆဲပါ။ ဆိုတော့ ဒီနေ့အထိ conclusion လုပ်လို့မရသေးပါဘူး” ဟု စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ဒေါ်နီနီစံက မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကျင်းပသောအဆိုပါရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ကျောက်မီးသွေးဆိုသည့်အသံကြားလိုက်တာနှင့် အဆိပ်အတောက်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေကြောင်း ဒေါ်နီနီစံက ပြောသည်။
ယခုသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ တည်ဆောက်မည့်နေရာအတွက် တရားဝင်အကြောင်းကြားစာမရရှိသေးသည့်အတွက် ပြောရန် စောသေးကြောင်း နိုင်လဝီအောင်က ပြောသည်။
“အမှန်ကတော့ အသိပေးရမယ်။ အသိပေးပြီးမှ ကျနော်တို့က လွှတ်တော်ကို တင်ရမယ်။ လွှတ်တော် အတည်ပြုချက် ယူပြီးတော့မှ နောက်အစိုးရလက်ထက်ထိ သွားလို့ရမှာကို။ သူတို့တော့ အသိပေးမယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ။ ပြဿနာဖြစ်ရင် ပြည်ထောင်စုပြဿနာပဲ” ဟု ၄င်းက ပြောပါသည်။
ပြည်နယ်တွင် ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့် ၄င်းအောက်သာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ၄င်းပမာဏထက်ကျော်သည့်ပမာဏအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဟု နိုင်လဝီအောင်က ပြောသည်။
သို့သော် ယခုလက်မှတ်ရေးထိုးမှုသည် မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်၌ ကျောက်မီးသွေးသုံးလျှပ်စစ် စက်ရုံဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ဟု Myanmar Business Today တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၄င်းဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သည် စီမံကိန်းအဆိုပြုထားသည့်နေရာအနီးတွင် ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူရန်အတွက် မြေနေရာများလာရောက်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း စီမံကိန်းအဆိုပြုထားသည့်နေရာမှ ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
ကေသီ အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 2015-04-24
Tags ကေသီ အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
Previous “ပုဒ်မ ၁၇ (၁)”
Next ပြီးခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မွန်ပြည်နယ်ယစ်မျိုးအခွန်ငွေ ကျပ်သိန်း ၇၀ဝ၀ ကျော်ရရှိ